KNOWLEDGE Archives - Sainpwar
အကျိူးအကြောင်း ဆီလျော်အောင် မတွေးတတ်တဲ့ ရှေးရိုးစွဲသမားတွေ တွေ့တိုင်း ဖတ်ပါ….
( မြန်မာတို့၏ တလွဲအယူများ….) အကျိူးအကြောင်း ဆီလျော်အောင် မတွေးတတ်တဲ့ရှေးရိုးစွဲသမားတွေ တွေ့တိုင်း ဖတ်ပါ။ အမတော် ‘သုစိတ’ မောင်တော်’နန္ဒ’ အပိုင်စားရတဲ့မင်းဘူးက နဂါးပွက်အိုင်…. တကယ်တော့ ဂေါပကတွေရော အဲ့ဒီလာတဲ့နဂါးကိုလာဖူးကြတဲ့သူတွေပါ။ ပထဝီသင်ခဲ့ကြမှာပါ ။ ၅တန်း ၆တန်းလောက်ဆို မီးတောင်အကြောင်း စာသင်နေရပြီ။ ရွှံ့မီးတောင် / မီးတောင်သေ / မီးတောင်ငြိမ်း သင်ဖူးကြမှာပါ ။ အခုလို ရွှံ့မီးတောင်အပေါက်ဝထဲကို နွားနို့နဲ့ကြက်ဥတွေ ပစ်ထည့်ကြတယ်။ အမွှေးတိုင်ပေါင်း သောင်းချီပူဇော်ကြတယ် […]
နေပြည်တော်လမ်း နေပူထဲ လမ်းလျှောက်ရင်းကားတားနေတဲ့ ကိုရင်လေးကိုတွေ့လို့ မေးလျှာက်ကြည့်လိုက်သောအခါ
နေပြည်တော်လမ်း နေပူထဲ လမ်းလျှောက်နေတဲ့ ကိုရင်လေးကို မေးလျှာက်ကြည့်လိုက်သောအခါနေပြည်တော် ခရီးသို့အသွား လမ်းခုလတ် တွင် နေပူပူ ထဲမှာ ကိုရင် ငယ်လေးတစ်ပါး လမ်းကြုံလိုက်ဖို့ ကားတားနေတာ မြင်နေတာ နဲ့ ကားရပ်ခိုင်းပြီးကားပေါ်သို့ ပင့်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။တခြားကားတွေကလည်း လူအပြည့် ဆိုပြီး မရပ်ဘူး ဒကာကြီးရယ်တဲ့ ကိုရင်လေး ကားတားနေတာ၂နာရီကျော်ကြာပြီတဲ့ ဒါနဲ့ ကိုရင်လေးကိုဘယ်ကျောင်းကလဲ ဘွဲ့နာမည် ဘယ်လိုမှည့်ခေါ်ပါသလဲ ဆိုပြီး စတင်မိတ်ဆက်ကာသွားလိုတဲ့ ခရီး စဉ်မေးကြည့်တာ့ သံဃာ ၄၅ ပါးရှိတဲ့ […]
ထူးဆန်းလှသည့်ခြေတော်ရာရှင် ဘုန်းဘုန်းမဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ဆွမ်းခံကြွရာထူဆန်းမှုများကို စုစည်း တင်ပြပူဇော်ခြင်း
ထူးဆန်းလှသည့်ခြေတော်ရာရှင် ဘုန်းဘုန်းမဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ဆွမ်းခံကြွရာထူဆန်းမှုများကို စုစည်း တင်ပြပူဇော်ခြင်း ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ထူးခြားဖြစ်စဥ်တစ်ခုကဆရာတော်ဟာရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း မိုင်းပျဥ်းမြို့နဲ့မနီးတဲ့ သုဝဏ္ဏသျှံ တောင်ပေါ်မှာသီတင်းသုံးတော်မူစဥ်ကတောင်ပေါ်မှတောင်အောက်ပလောင်တိုင်းရင်းသားရွာသို့ နေတိုင်း ဆွမ်းခံကြွတယ်။ ကျောင်းမှပုံမှန် နံနက် (၁၀း၃၀)နာရီကြွထွက်ရာတောင်ပေါ်ကျောင်းသို့နံနက် (၁၁း၀၀) နာရီမှာကျောင်းသို့နာရီဝက်နဲ့ပြန်ရောက်တော်မူခဲ့တယ်။ လမ်းလျောက်မည်ဆိုပါကအဆင်း ၃နာရီ နဲ့အတက် ၃ နာရီကျော်ကျော်ကြာပါတယ် အသွားအပြန် ၆. နာရီကျော်လောက်ကြာပါတယ်။ ဆရာတော်ကမိနစ်(၃၀) တည်းဖြင့်ဆွမ်းခံကြွသည်ဆိုသောသတင်းကြောင့်ရွာသူ ရွာသားများက. (ရဟန္တာ) လို့သမုတ်ပြီး ဆရာတော် ကြီးထင်ရှားကျော်ကြားတော်မူလာပါတယ်။ ဆရာတော်ကြီးကိုပလောင်လူမျိုးတွေကကြည်ညိုလွန်းလို့ သူတို့ရဲ့သက်ရှိဘုရားလို့ပြောကြတယ်။ ရွာနားမှာတောင်ကျချောင်းရှိတယ် ချောင်းရေဟာမိုးကြီးပြီး […]
သီလ၊သမာဓိနဲ့ပြည့်စုံပြီး လူအများအပြားကကြည်ညိုလေးစားရတဲ့ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ ရဟန်းပျိုဘဝက ရှားပါးပုံရိပ်များ
ဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားကျယ်ပြန့်တဲ့ မြန်မာပြည်တွင်းမှာဆိုရင် သီလ၊သမာဓိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ ရဟန်း၊သံဃာတော်တွေလည်း များစွာရှိပါတယ်။ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုရင်လည်း ထိုင်း၊မြန်မာ၊လာအို နဲ့ဘူတန်နိုင်ငံတွေကသာသနာဆိုင်ရာ ဘွဲ့တံဆိပ်တွေချီးမြှင့်ခြင်းတွေရရှိခဲ့ပြီး လူအများကကြည်ညိုလေးစားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်မွေးဖွားချိန်ကလည်း အချိန်အခါမဟုတ်ဘဲ မိုးတွေအဆက်အပြတ်ရွာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်က (၁၁)နှစ်သားအရွယ်ကတည်းက သာမဏေဘောင်သို့ဝင်ခဲ့ပြီး ကိုရင်ငယ်ဘဝမှာလည်းအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် တရားဘာဝနာတွေပွါးများအားထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုရင်အဖြစ်နဲ့လည်း ဒါယကာ၊ဒါယိကာမတွေလှူဒါန်းကြတဲ့ ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုလည်း တွယ်တာခြင်းမရှိဘဲ ပြန်လည်လှူဒါန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငယ်စဉ်ကတည်းက ဝါတွင်းသုံးလပတ်လုံး ဂူအောင်းပြီး တရားကျင့်ကြံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော်ဘုရားက အမြဲတမ်းလိုလို ဂူအောင်းတရားကျင့်လေ့ရှိပြီး အခက်အခဲမျိုးစုံကိုလည်း ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ (၁၁)နှစ်သားကတည်းက ဘုရားသားတော်အဖြစ် သာသနာပြုပြီး လူသားတွေကိုကယ်တင်စောင့်ရှောက်ခဲ့တာ […]
စနေသားသမီးများအတွက် ဘဝတစ်သက်စာဟောစာတမ်းနှင့် ယတြာများ
မိမိတို့ရဲ့ အသက်အပိုင်းခြားကို ကြည့်ပြီး အဟောကို ဖတ်ပါလေ။ ညံ့တဲ့နှစ်တွေမှာ ချေရမယ့် ယတြာကိုပါ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ကောင်းတဲ့ နှစ်တွေမှာလည်း ကောင်းသထက် ကောင်းစေဖို့ ချေရမယ့် ယတြာတွေကိုလည်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ စနေသားသမီးဖြစ်သောသင်သည် အသက် ၁၊၉၊၁၇၊၂၅၊၃၃၊၄၁၊၄၉၊၅၇၊၆၅၊၇၃၊၈၁၊ ၈၉၊၉၇၊၁၀၅ နှစ်အတွင်း၌ စနေ သက်ရောက်ဖြစ်၏သင်သည်ယခုနှစ်အတွင် အလုပ်နေရာ အိမ်နေရာအသစ်ရခြင်၊နေရာထိုင်ခြင်း၊မွမ်းမံရခြင်း၊ပြောင်းရွှေရခြင်းများကြူံရတတ်၏။ခရီးတို၊ခရီးရှည်များ သွားနေရလိမ့်မည်။ ထိုခရီးများသည်လဲ သင့်အတွက်အကျိုးထူးစေပါလိမ့်မည်။မထင်မှတ်ဘဲ ပညာတစ်ခုသင်ကြားရခြင်း၊သင်တန်းတစ်ခုတက်ရခြင်းများပြုရတတ်၏။မရည်ရွယ်ဘဲ မြေဝင်တတ်၏။အလုပ်အကိုင်၌ ထိခိုက်တတ်၏။ပြသနာကြီးစွာဖြေရှင်းရတတ်၏။ ရုံးပြင်ကန္နား၊အမှုအခင်းများနှင့်ပတ်သက်ရတတ်၏။မိမိနှင့်တကွ မိသားစုပါ ကျန်းမာရေးညံ့တက်၏။ဆေးရုံ၊ဆေးခန်းရောက်ရတတ်၏။မီး၊လျှပ်စစ် ဒုက္ခပေးတတ်၏။အထူးသတိပြုပါ။ […]
သောကြာ သားသမီးများအတွက် ဘဝတစ်သက်စာ ဟောစာတမ်း နှင့် ယတြာများ
မိမိတို့ရဲ့ အသက်အပိုင်းခြားကို ကြည့်ပြီး အဟောကို ဖတ်ပါလေ။ ညံ့တဲ့နှစ်တွေမှာ ချေရမယ့် ယတြာကိုပါ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ကောင်းတဲ့ နှစ်တွေမှာလည်း ကောင်းသထက် ကောင်းစေဖို့ ချေရမယ့် ယတြာတွေကိုလည်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ သောကြာသားသမီး ဖြစ်သောသင်သည် အသက် ၁၊၉၊၁၇၊၂၅၊၃၃၊၄၁၊၄၉၊၅၇၊၆၅၊၇၃၊၈၁၊ ၈၉၊၉၇၊၁၀၅ နှစ် အတွင်း၌ သောကြာသက်ရောက် ဖြစ်၏ သင်သည် ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်း မိဘကို ကောင်းစွာ ပြုစုစောင့်ရှောက်နိုင်မည့် အချိန်ဖြစ်၏။စီးပွား သိသိသာသာ တက်မည်။သိကြား မလိုက်သကဲ့သို့ လက်ရှိအခြေအနေထက်များစွာမြင့်တက်သွားမည်။ […]
ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီးများအတွက် ဘဝတစ်သက်စာဟောစာတမ်း နှင့် ယတြာများ
မိမိတို့ရဲ့ အသက်အပိုင်းခြားကို ကြည့်ပြီး အဟောကို ဖတ်ပါလေ ညံ့တဲ့နှစ်တွေမှာ ချေရမယ့် ယတြာကိုပါ ဖော်ပြပေးထားပါတယ် ကောင်းတဲ့ နှစ်တွေမှာလည်း ကောင်းသထက် ကောင်းစေဖို့ ချေရမယ့် ယတြာတွေကိုလည်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အသက် ~ ၁၊၉၊၁၇၊၂၅၊၃၃၊၄၁၊၄၉၊၅၇၊၆၅၊၇၃၊၈၁၊၈၉၊၉၇၊၁၀၅ နှစ် အတွင်း၌ ဗုဒ္ဓဟူး သက်ရောက် ဖြစ်၏ သင်သည် ယခုနှစ်အတွင်း သင်တန်းတစ်ခုခုတက်ရခြင်း အဖွဲအစည်းတစ်ခုအတွင်း ဝင်ရောက်ရခြင်းများ ကြုံရတတ်၏ နယားချိန်မရလောက်အောင်အလုပ်ရှုပ်နေလိမ့်မည် လွန်စွာပင်ပန်းလိမ့်မည်။ ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်သင့်သောကာလဖြစ်သည်။မည်သည့် အစားအသောက်ပဲ […]
မိမိတို့ရဲ့ အသက်အပိုင်းခြားကို ကြည့်ပြီး အဟောကို ဖတ်ပါလေ။ ညံ့တဲ့နှစ်တွေမှာ ချေရမယ့် ယတြာကိုပါ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ကောင်းတဲ့ နှစ်တွေမှာလည်း ကောင်းသထက် ကောင်းစေဖို့ ချေရမယ့် ယတြာတွေ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ တနလာင်္သားသမီး ဖြစ်သောသင်သည် အသက် ၁၊၉၊၁၇၊၂၅၊၃၃၊၄၁၊၄၉၊၅၇၊၆၅၊၇၃၊၈၁၊ ၈၉၊၉၇၊၁၀၅ နှစ်အတွင်း ၌ တနင်္လာ သက်ရောက် ဖြစ်၏ယခုနှစ်အတွင်း သင်သည် အလှူအတန်း ကိစ္စများ မုချ လုပ်ရမည်ဖြစ်၏။ ငွေအစုလိုက် အပုံလိုက် ဝင်လာမည်ဖြစ်၏။ မိမိ၏အလုပ်မှလည်းကောင်း၊ထီပေါက်၍လည်ကောင်း […]
သူမွေးထားတဲ့ နွားတွေကို ငါချမ်းသလို သူလည်းချမ်းနေရှာမှာဆိုပြီး စောင်ခြုံပေးထားတဲ့ နွားပိုင်ရှင်….
သူေမြးထားတဲ့ ႏြားေတြကို ငါခ်မ္းသလို သူလည္းခ်မ္းေနရွာမွာဆိုၿပီး ေစာင္ၿခဳံေပးထားတဲ့ ႏြားပိုင္ရွင္ ဆင္ျဖဴကြၽန္းက ႏြားေတြေမြးထားတဲ့ ႏြားပိုင္ရွင္ကေတာ့ ခုလို ေအးခ်မ္းလွတဲ့ ေဆာင္းရာသီမွာ ငါေတာင္ခ်မ္းေနတာ သူေမြားထားတဲ့ ႏြားေတြလဲခ်မ္းေနမွာပဲဆိုပီးေတာ့မွ အိမ္မွာရွိတဲ့ ေလာေလာဆယ္ ေစာင္ေတြကို ၿခဳံထားေပးပါတယ္။ တကယ့္ၾကင္နာမႈရွိတာကိုေတြ႕ျမင္ရမွာပါ။ၾကင္နာမႈ အတြက္ေလးစားပါတယ္ဗ်ာ ငါခ်မ္းသလိုသူလည္းခ်မ္းေနရွာမွာပဲ ဆင္ျဖဴကြၽန္းက ႏြားပိုင္ရွင္တစ္ေယာက္ Unicode သူမွေးထားတဲ့ နွားတွေကို ငါချမ်းသလို သူလည်းချမ်းနေရှာမှာဆိုပြီး စောင်ခြုံပေးထားတဲ့ နွားပိုင်ရှင် သူမွေးထားတဲ့ နွားတွေကို ငါချမ်းသလို သူလည်းချမ်းနေရှာမှာဆိုပြီး […]
ေ႐ႊလမ္း၊ေငြဝင္လမ္းပြင့္ေစသည့္စေနရက္တစ္ပတ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္သာလုပ္ရေသာေငြဝင္ၾကမ္းတဲ့နဂါးယၾတာ အေႂကြးလည္းေၾက၊ေငြဝင္လမ္းပြင့္ေစသည့္စေနရက္တစ္ပတ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္စေနေန႔က်ေရာက္သည့္ေန႔တြင္ေျခသည္းလက္သည္းညႇပ္ျခင္း၊ဆံပင္ညႇပ္ျခင္းသို႔မဟုတ္ေခါင္းေလွ်ာ္ေခါင္းေဆးမဂၤလာျပဳလုပ္ေရခ်ိဳးသန္႔စင္ျခင္း၊ အိမ္အတြင္းရွိအမႈိက္သ႐ိုက္မ်ားသန္႔ရွင္းစြန္႔ပစ္လိုက္ျခင္း၊အိမ္မွာထမင္းစားခန္းသီးသန္႔ရွိလွ်င္ထိုအခန္းအတြင္းကိုသန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ပါ။မိသားစုေပ်ာ္႐ႊင္ရယ္ေမာေစသည့္ဓါတ္ပုံမ်ား၊က်က္သေရရွိၿပီးလွပေသာပန္းပုံမ်ားကို တပ္ဆင္ထားလွ်င္အင္မတန္စီးပြားတက္လာဘ္႐ႊင္သည္ပိုက္ဆံ1000ျဖစ္ေစ10000ျဖစ္ေစပံသကူပစ္လႉျခင္းသံဃာေတာ္ဘုန္းႀကီးသူေတာ္စင္မ်ား၊သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားကိုမိမိတတ္စြမ္းႏိုင္သေ႐ြ႕ပုတီးမ်ားလႉဒါန္းေပးရျခင္တာလီစက္မ်ားလႉေပးရျခင္း တိုင္ကပ္နာရီလႉေပးရျခင္းျမတ္စြာဘုရားရွင္အားႏွမ္းဆီျဖင့္ဆီမီးထြန္းညႇိပူေဇာ္ျခင္းကံေခ်ကန္ေတာ့ငါးပါးသီလခံယူၿပီးသုဂေတာဂုဏ္ေတာ္ကိုပုတီး(၁၀)ပတ္တိတိ စိပ္ရျခင္း၊ေမတၱာပို႔ေပးျခင္းသူေတာ္စင္သူေတာ္ျမတ္မ်ား၏ေမတၱာကိုခံယူျခင္းအထက္ပါအတိုင္းစေနေန႔တြင္ သတိတရလုပ္ေဆာင္သြာမည္ဆိုပါကက်က္သေရမဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ျပည့္စုံေစၿပီးေငြအေႂကြးတင္ေနလို႔ေသာကေရာက္ေနသူမ်ားအေႂကြးျမန္ျမန္ေၾကေစရန္ေငြေၾကးကံႏွိမ့္ေနသူ၊လာဘ္ပိတ္ေနသူမ်ားေငြကံျမင့္ၿပီး လာဘ္ပြင့္ေစမယ့္နည္းေကာင္းမ်ားပါေငြေၾကးအရႈပ္အရွင္းကိစၥနဲ႔ပက္သက္ၿပီးႀကံႀကံဖန္ဖန္အဆင္ေျပသြားေနျခင္းကိုမုခ်ေတြ႕ေနရပါလိမ့္မယ္ေဖာ္ျပထားသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုအားလုံးမလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္ဆိုရင္ေတာင္မွနည္းတစ္ခုခုေတာ့လုပ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေပးသြားၾကပါခင္ဗ်တစ္ျခားေန႔ရက္မ်ားတြင္လည္းအထက္ပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားလုပ္လို႔ရပါတယ္။ အတိုက္အခိုက္အေႏွာင့္အယွက္ကင္းေဝးေစၿပီးစိတ္ခ်မ္းသာေစပါတယ္ခင္ဗ်ဆရာဦးမင္းႏိုင္သင္ျပေျပာျပခဲ့ၿပီးဆရာကိုယ္တိုင္လုပ္ေဆာင္ေနတာၾကာလာခဲ့ပါၿပီ။ အက်ိဳးခံစားခ်က္အာနိသင္မ်ားကိုဆရာ့မိတ္ေဆြမ်ားတၿမဳံၿမဳံအားရပါးရရရွိေစရန္ေစတနာႏွင့္မွ်ေဝေပးလိုက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ၇ရက္သားသမီးမ်ားေငြေၾကးျပသနာအခက္အခဲမ်ားကင္းေဝးေစၿပီး စီးပြားတက္ အေႂကြးဆပ္ႏိုင္ၾကပါေစဆရာေပါက္က်ိဳင္းcredit Unicode ရွှေလမ်း၊ငွေဝင်လမ်းပွင့်စေသည့်စနေရက်တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်သာလုပ်ရသောငွေဝင်ကြမ်းတဲ့နဂါးယတြာ အကြွေးလည်းကြေ၊ငွေဝင်လမ်းပွင့်စေသည့်စနေရက်တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်စနေနေ့ကျရောက်သည့်နေ့တွင်ခြေသည်းလက်သည်းညှပ်ခြင်း၊ဆံပင်ညှပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ခေါင်းလျှော်ခေါင်းဆေးမင်္ဂလာပြုလုပ်ရေချိုးသန့်စင်ခြင်း၊ အိမ်အတွင်းရှိအမှိုက်သရိုက်များသန့်ရှင်းစွန့်ပစ်လိုက်ခြင်း၊အိမ်မှာထမင်းစားခန်းသီးသန့်ရှိလျှင်ထိုအခန်းအတွင်းကိုသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပါ။မိသားစုပျော်ရွှင်ရယ်မောစေသည့်ဓါတ်ပုံများ၊ကျက်သရေရှိပြီးလှပသောပန်းပုံများကို တပ်ဆင်ထားလျှင်အင်မတန်စီးပွားတက်လာဘ်ရွှင်သည်ပိုက်ဆံ1000ဖြစ်စေ10000ဖြစ်စေပံသကူပစ်လှူခြင်းသံဃာတော်ဘုန်းကြီးသူတော်စင်များ၊သက်ကြီးရွယ်အိုများကိုမိမိတတ်စွမ်းနိုင်သရွေ့ပုတီးများလှူဒါန်းပေးရခြင်တာလီစက်များလှူပေးရခြင်း တိုင်ကပ်နာရီလှူပေးရခြင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်အားနှမ်းဆီဖြင့်ဆီမီးထွန်းညှိပူဇော်ခြင်းကံချေကန်တော့ငါးပါးသီလခံယူပြီးသုဂတောဂုဏ်တော်ကိုပုတီး(၁၀)ပတ်တိတိ စိပ်ရခြင်း၊မေတ္တာပို့ပေးခြင်းသူတော်စင်သူတော်မြတ်များ၏မေတ္တာကိုခံယူခြင်းအထက်ပါအတိုင်းစနေနေ့တွင် သတိတရလုပ်ဆောင်သွာမည်ဆိုပါကကျက်သရေမင်္ဂလာအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံစေပြီးငွေအကြွေးတင်နေလို့သောကရောက်နေသူများအကြွေးမြန်မြန်ကြေစေရန်ငွေကြေးကံနှိမ့်နေသူ၊လာဘ်ပိတ်နေသူများငွေကံမြင့်ပြီး လာဘ်ပွင့်စေမယ့်နည်းကောင်းများပါငွေကြေးအရှုပ်အရှင်းကိစ္စနဲ့ပက်သက်ပြီးကြံကြံဖန်ဖန်အဆင်ပြေသွားနေခြင်းကိုမုချတွေ့နေရပါလိမ့်မယ်ဖော်ပြထားသည့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအားလုံးမလုပ်နိုင်ခဲ့သည်ဆိုရင်တောင်မှနည်းတစ်ခုခုတော့လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျတစ်ခြားနေ့ရက်များတွင်လည်းအထက်ပါလုပ်ဆောင်ချက်များလုပ်လို့ရပါတယ်။ အတိုက်အခိုက်အနှောင့်အယှက်ကင်းဝေးစေပြီးစိတ်ချမ်းသာစေပါတယ်ခင်ဗျဆရာဦးမင်းနိုင်သင်ပြပြောပြခဲ့ပြီးဆရာကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်နေတာကြာလာခဲ့ပါပြီ။အကျိုးခံစားချက်အာနိသင်များကို ဆရာ့မိတ်ဆွေများတမြုံမြုံအားရပါးရရရှိစေရန်စေတနာနှင့်မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ၇ရက်သားသမီးများငွေကြေးပြသနာအခက်အခဲများကင်းဝေးစေပြီး စီးပွားတက် အကြွေးဆပ်နိုင်ကြပါစေဆရာပေါက်ကျိုင်းcredit